ओलीसामू प्रचण्ड निरीह, खनाल-नेपाल रुष्ट ! - Sidha News
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रभाव नेपाली राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएको छ । खुल्ला राजनीतिमा आएपछि अध्यक्ष दाहालको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको थियो । पछिल्लो दशक नेपाली राजनीति दाहालकै वरिपरि घुमेको थियो । तर, तत्कालिन् नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएपछि प्रचण्डको भूमिका कमजोर बनेको छ । अब उनी नेपाली राजनीतिमा निर्णायक नरहेको कुरा स्वयम उनीनिकट नेताहरुको दाबी छ।
दुई पार्टीबीच एकता भएपछि बनेको नेकपामा दुई जना अध्यक्ष छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड । दुई जना अध्यक्षमध्ये आफू पहिलो र दाहाल दोस्रो वरियताको भनेर ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलिदिएका छन् । ओलीलाई स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म नेकपामा अरु कसैले पनि पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व गर्छु भनेर नचिताएपनि हुने भनेर संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले स्पष्ट पारिसकेका छन्।
कतिपयले दाहालले ओलीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नुसम्म ठीक थियो तर पार्टी एकता गर्नु नै गलत भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । दाहालनिकट एक नेताले भने,‘प्रचण्डले केपी ओलीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु ठीक थियो । तर, उहाँले पार्टी एकता गर्नु नै महाभूल भयो। उहाँ चुक्नुभयो।’ ओलीले दाहाललाई कहिल्यै पनि नरुचाएको र दाहालको हित हुनेगरि ओलीले कुनैपनि कदम चाल्नै नसक्ने उनको ठोकुवा छ।
नेकपा एमालेसँग पार्टी एकतापछि नै दाहालको शक्ति घटेको छ । दाहालले ओलीसँग सरकारको नेतृत्व अढाई/अढाई वर्ष गर्नेगरि आलोपालोको सहमति गरेका थिए । तर, पछि उनले उक्त सहमतिबाट पनि आफूलाई ब्याक गरेर पाँच वर्ष नै ओलीलाई सरकार चलाउन दिने सार्वजनिक रुपमै स्पष्ट पारे । आलोपालो सहमतिबाट ब्याक हुनु दाहालको अर्को भूल भएको उनीनिकट नेताहरुको टिप्पणी छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले त दाहालले ओलीसँग गरेको आलापालो सहमति छोडेर गलत गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । रायमाझी अहिले दाहालको क्याम्पमा समेत छैनन् । उनले सार्वजनिक रुपमै ओलीलाई हटाउन नहुने बताउँदै आएका छन्।
गत मंसिरमा ओली–दाहालबीच ओलीले सरकार र दाहालले पार्टीको नेतृत्व गर्नेगरि नयाँ समझदारी भयो । यो सहमति भएपछि दाहालले सार्वजनिक रुपमै बल्ल आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षको ‘फिलिङ’ आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, ओलीले दाहाललाई पार्टीमा एकल निर्णय गर्नसक्ने अधिकार कहिल्यैपनि दिएनन् । बरु, पाईला-पाईलामा दाहालमाथि अंकुश लगाईरहे । दाहाल ओलीसामू कतिसम्म निरीह बने भने ओलीले सार्वजनिक रुपमै आफू सिनियर अध्यक्ष र दाहाल जुनियर भन्दापनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
यही असार १० गतेदेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठकमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीलाई हटाउने माग भएसँगै बैठक नै प्रभावित बन्दै आएको छ । ओलीको राजीनामा दाहालले मात्रै होईन पूर्व एमाले खेमाकै अधिकांश सदस्यहरुले मागेका छन् । बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बैठकमै ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए।
आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक एक साता स्थगित् भएको छ । यो बीचमा दुई अध्यक्षबीच सहमतिको लागि पटक-पटक एक्लाएक्लै भेटवार्ता पनि भएका छन् । तर, ओलीले आफूले कुनैपनि हालतमा दुवै पदबाट राजीनामा नदिने बरु बहुमत भए हटाएर देखाउन दाहाललाई खुल्ला चूनौति दिएका छन् । त्यही पनि दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई हटाउनेबारे कुनै कदम चाल्न सकेन । दाहालले अध्यक्षको हैसियतले स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर, उनले त्यो गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण–ओलीसामू निरीह हुनु नै हो।
ओलीविरुद्ध बहमुतको डण्डा देखाएर राजीनामा मागेपछि त्यसलाई निश्कर्षमा पुर्याउन दाहालले चुकेको चर्चा तथा परिचर्चा पार्टीभित्र र बाहिर भैरहेको छ । दाहाल–नेपाल समूहकै एक नेता भन्दै थिए,‘नेकपामा अब केपी ओली नै किङमेकर हुनुभयो । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको निर्देशनमा चल्ने पात्रको रुपमा देखिनुभयो।’
ओलीविरुद्ध दाहालको पक्षमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालजस्तो नेता उभिँदा र उनीहरुले समेत अब सहमतिको नाममा ओलीसँग वार्ता नगरी अब अघि बढ्न आग्रह गर्दा दाहालमाथि अनिर्णयको बन्दी बनेको आरोप छ । पछिल्लो समय दाहालले बोलाउने आफूनिकटहरुको भेलापनि प्रभावहिन बन्न थालेका छन् । दाहालले बोलाउने गरेका भेलामा सहभागिता जनाउन उनीनिकट नेताहरुले नै खासै रुचि नदेखाएको स्रोतको दाबी छ। (रिपोर्टस नेपाल)
कोरोनाविरुद्ध आशा : खोपसहित रसियन उच्चस्तरीय
बामदेवद्वारा ओलीको भित्री योजनाहरूको भण्डाफोर, शीर्ष
‘हामीसँग सवै कमिटीमा बहुमत छ, केपी
बधाई दिन सिंहदरबार बोलाइएकी सपनाले अर्थमन्त्रीलाई
दुई श्रीमती हुँदाहुँदै तेस्रो विवाह गरेको
आज पनि सुनको भाउ बढ्यो, कति
प्रहरीहरुले हरेक दिन श्रीमतीलाई ‘आइ लभ
जब ओलीले भने यस्ता बैठकको के
बामदेवद्वारा ओलीको भित्री योजनाहरूको भण्डाफोर, शीर्ष नेताहरूलाई तनाब
‘हामीसँग सवै कमिटीमा बहुमत छ, केपी ओलीलाई पार्टीबाटै निकाल्ने हो’
योभन्दा बढी सहन सक्दैनौँ : रामचन्द्र पौडेल
‘गधा धोएर कहिल्यै गाई हुँदैन भने जस्तै कम्युनिस्टहरु कहिल्यै सुध्रिदैनन्
ओलीले जे भन्यो त्यही हुँदैन: शाक्य
राजतन्त्रको प्रदर्शनमा कसको लगानी ?
प्रचण्डलाई फकाउने ओलीको कसरत तीव्र, ईश्वर पोखरेल खुमलटारमा
‘रामचन्द्र पौडेल र प्रदिप पौडेल दलाल दलाल हुन्’ – किशान श्रेष्ठ